कसरी कोरोनाभाईस पछि स्वाद र गन्ध पुनः प्राप्त गर्न - स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा मनोरञ्जन कम्पनी, समाचार समुदाय, कम्पनी प्रेस घरपालुवा जनावर औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, चेकआउट समाचार, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार >> कसरी कोरोनाभाईस पछि स्वाद र गन्ध पुनः प्राप्त गर्न
ज्वरो, शरीर दुखाइ, र एक सुख्खा खोकी COVID-19 को लक्षण लक्षण हो; उपन्यास कोरोनाभाइरसको कारण भएको रोग। दुई अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षणहरू यति व्यापक रूपमा रिपोर्ट गरिएको छ कि तिनीहरूलाई कहिलेकाँही संक्रमणको सबैभन्दा भरपर्दो प्रारम्भिक सूचक मानिन्छ: गन्ध गुमाउनु (anosmia) र स्वाद (ageusia)। तर यो अनौंठो प्रभाव को व्यापकता के हो? सामान्यतया यो कति लामो हुन्छ? के त्यहाँ अन्य रोगहरू छन् जुन यी लक्षणहरूलाई निम्त्याउन सक्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नको लागि पढ्नुहोस्।
कोरोनाभाइरसबाट स्वाद र गन्धको क्षति कति सामान्य छ?
कोभिड १ patients बिरामीहरु मध्ये करिब% 74% को अनुसार गन्धको भावना हराउँछ एउटा अध्ययन । धेरैले आफ्नो स्वादको भावना पनि गुमाउँछन् - सायद किनभने स्वाद र अरोमा आपसमा जोडिएका छन्। अर्को शब्दहरुमा, स्वाद र गन्ध को हराउनु COVID-19 को एक धेरै सामान्य लक्षण हो। प्राय: यो पहिलो देख्न सकिने संकेतहरू मध्ये एक हो जुन व्यक्तिले अनुबंध गरेको हुन सक्छकोरोनाभाइरस।
दशकौं देखि, चिकित्सकहरु लाई थाहा छ कि श्वास नलिका भाइरल इन्फेक्सन गन्ध को एक तीव्र क्षति को सबैभन्दा सामान्य कारण हो, भन्छन्जावेद सिद्दीकी एमडी, MPH, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी TeleMed2U । SARS-CoV-2 को भर्खरको महामारीको साथ, धेरै महामारीविज्ञानसम्बन्धी अध्ययनहरूले देखाए कि सार्स-कोभ -२ सँग संक्रमण एनोसमिया (वा गन्धको क्षति) को उच्च दरसँग सम्बन्धित छ जुन पहिले अन्य भाइरल संक्रमणको साथ देखा पर्‍यो।
त्यहाँ केही प्रमाण छ त्यो स्वाद र गन्धको क्षति रोग को हल्का देखि मध्यम रूप संग अधिक सामान्य हुन सक्छ, गम्भीर अवस्थाको विपरीत। केवल २.9..9% बिरामीहरू COVID-१ with का अस्पतालमा भर्ना मात्र anosmia रिपोर्ट गरे, जबकि V 66..7% COVID-१ infections संक्रमणहरुमा बाहिरी बिरामीहरु लाई उपचारको रूपमा देखायो। यूसी सैन डिएगो स्वास्थ्य अनुसार । समान प्रतिशत स्वाद गुमाउन को लागी पाए।
कसरी कोरोनाभाइरस स्वाद र गन्ध को नुकसान को लागी गर्छ?
वैज्ञानिकहरूले अझै सिकिरहेका छन् कि कसरी COVID-19 ले स्वाद र गन्ध रोगको कारण गराउँछ, यद्यपि उनीहरूले यसमा स्नायु प्रणाली समावेश छ भन्ने शंका गर्छन्। हार्वर्ड मेडिकल स्कूलका अन्वेषकहरू विश्वास गर्छन् कि उनीहरूले घ्राण्‍डार बल्बमा (सेल्ट-कोभ -२ भाइरस) संक्रमणको सबैभन्दा जोखिममा रहेका घ्राण्‍ड बल्बमा सेल प्रकारहरू चिनेका छन् र ती हालसालै उनीहरूले लिएका छन्। उनीहरूको नतिजा प्रकाशित भयो । एनोसमिया (वा गन्धको क्षति) को तर्कलाई अझ राम्ररी बुझ्न हामीले पहिला छलफल गर्नु आवश्यक छ कि नाकको अस्तर कोशिकाले बनेको छ घ्राउरो एपिथेलियम (ओई), डा सिद्दिकी भन्छन्। OE को प्राथमिक भूमिका गन्ध पहिचान हो। डा। सिद्दिकीले भनेझैं भाइरसको लागि संक्रमणको प्राथमिक साइट COVID-१ causes पैदा गर्ने नासफेरिनेक्स हो जुन घाँटीको माथिल्लो भाग नाकको पछाडि हुन्छ।
हामीलाई थाहा छ SARS-CoV-2 ले ACE2 रिसेप्टर (धेरै सेल प्रकारको सतहमा प्रोटिन) शरीरमा बिभिन्न कोषहरूमा प्रवेश पाउन प्रयोग गर्दछ, डा। सिद्दीकी बताउँदछन्। हार्वर्ड अनुसन्धान समूहले फेला पारेको एफिथेलियम भित्र विशेष कोशिका ACE2 रिसेप्टर्स उच्च आवृत्ति मा अभिव्यक्त भएको छ। जस्तो कि गन्ध गुमाउन सम्भावित कारण SARS-CoV-2 द्वारा घ्राण्ने एपिथेलियम कोशाहरूको प्रत्यक्ष संक्रमणको कारण हो। अर्को शब्दमा, COVID-१ directly ले दिमागमा गन्ध पुर्‍याउने संवेदी न्युरोनलाई प्रत्यक्ष संक्रमित गर्दैन। यसले कसरी सहयोगी कोषहरू काम गर्दछन् त्यसले असर गर्दछ।
SARS-CoV-2 भाइरसको कारणले गन्ध र स्वादको हानी हुने संयन्त्र जटिल हुन सक्छ, तर यदि तपाइँ यी इन्द्रियहरूको नोक्सान अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने यसले सावधान हुन मद्दत गर्दछ COVID-19 संक्रमण को अन्य सामान्य लक्षणहरु जसमा समावेश:
ज्वरो / चिसो
यदि तपाईंले यी लक्षणहरू अनुभव गर्नुभयो भने, होश हराउँदाको साथ तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई कल गर्नुपर्नेछ।
स्वाद र गन्ध को हराउने को अन्य सम्भावित कारणहरु
तपाईंको स्वाद र गन्धको भावना हराउनुको मतलब यो होइन कि तपाईंसँग COVID-19 छ। सक्रिय संक्रमणको लागि सकारात्मक परीक्षण, वा तपाईंको रगतमा एन्टिबडीहरूको उपस्थिति कोरोनाभाइरस संक्रमणको एक मात्र सही प्रमाण हो। यी दुई इन्द्रियहरु को घाटा को लागी धेरै अन्य स्पष्टीकरणहरु छन्, सहित:
भाइरस: फ्लू वा साधारण चिसो जस्ता भाइरसले स्वाद वा गन्ध गुमाउन सक्छ।
एलर्जी: नाक एलर्जी र nonallergic राइनाइटिस (नाक नाक खुम्चा एलर्जी वा घाँटी ज्वरोको कारणले हुँदैन) पनि गन्ध को कम भावना हुन सक्छ।
नाक polyps: ठुलो नाक पोलिपहरूले नाकको अंशहरूलाई अवरोध गर्न सक्छ सास फेर्न कठिनाई, गन्ध हराउने, नाक बग्ने, र जीर्ण साइनस संक्रमण।
चिकित्सा अवस्था: केहि मेडिकल अवस्थाले अल्जाइमर रोग, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, र पार्किन्सन रोग सहित कम गन्धको भाव निम्त्याउन सक्छ। हार्मोनल परिवर्तनहरू, जस्तै रजोनिवृत्तिको समयमा, स्वाद र गन्धमा परिवर्तन हुन सक्छ।
टाउकोमा चोट लागेको वा नाकमा चोटपटक: एक दर्दनाक मस्तिष्कमा चोटले घाँटीको रोग लाग्न सक्छ, स्वाद र गन्ध गुमाउने परिणामस्वरूप।
औषधिहरू: केही औषधीहरूले एन्टिबायोटिक्स, मुटुको औषधि, र रक्तचाप औषधि सहित स्वाद र गन्धको भावना कम गर्न सक्छ। इंट्रानेसल जिंक उत्पादनहरू वा डिकन्जेन्ट्सको दीर्घकालीन प्रयोगले पनि स्वाद र गन्धको हानि हुन सक्छ।
विकिरण चिकित्सा: टाउको र घाँटीमा विकिरण र कीमोथेरापीले स्वाद र गन्धको कमजोर भावना निम्त्याउन सक्छ।
गन्धको भावना पनि स्वाभाविक रूपमा कम उमेर को रूप मा हामी उमेर। यदि तपाईं स्वाद र गन्ध को घाटा को बारे मा चिन्तित हुनुहुन्छ भने आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
कसरी तपाईंको स्वाद र गन्धको भावना सुरक्षित रूपमा परीक्षण गर्ने
जबकि COVID-19 का लक्षणहरूको एक विस्तृत श्रृंखला छ, रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरूको अनुसार (CDC) , स्वाद र गन्धको नयाँ घाटा प्रायः एक मात्र लक्षण हो जुन धेरै संक्रमित मानिसहरूले देख्दछन्। त्यसोभए, यी इन्द्रियहरू समय-समयमा इन-होम टेक्निकको साथ जेलीबीन टेस्ट भनिने परीक्षण गर्नु राम्रो विचार हुन सक्छ। CNN द्वारा रिपोर्ट गरिएको रूपमा ।
फ्लोरिडा युनिभर्सिटीमा स्मेल र स्वादका लागि केन्द्रका निर्देशक स्टीभन मुger्गर भन्छन् कि अर्को हातले तपाईको नाक पूरै ढाक्ने क्रममा एउटा जेलीबीन समातेर यो परीक्षण गर्न सकिन्छ; कुनै पनि हावा प्रवाह रोक्न। त्यसोभए, तपाईले जेलीबीन आफ्नो मुखमा राख्नुभयो र खान्नुहोस्। अझै च्यूई गर्दा, तपाईंले आफ्नो हात हटाउनुभयो जुन तपाईंको नाकमा कभर भएको थियो र यदि तपाईंको गन्धको भावना यथावत् छ, तपाईंले जेलिबीनको गन्ध र स्वाद सबै एकैचोटि दर्ता गर्नुपर्दछ। यसलाई रेट्रो अनुनासिक ओल्फ्याप्टन भनिन्छ, र यो यस्तो हुन्छ जब तपाईंको नाकको ग्रसको माध्यमबाट तपाईंको मुखको पछाडिबाट दुर्गन्धहरू आउँदछ र तपाईंको नाकको गुफामा जान्छ।
यदि तपाई जेलीबीन जाँचमा असफल हुनुभयो भने, यो तपाइँलाई COVID-19 छ भन्ने संकेत हुन सक्छ। तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नु पर्छ यदि तपाईलाई परिक्षण गर्नु पर्छ भने, वा साधारण गन्ध परिक्षणको बारेमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। यो परीक्षणमा विभिन्न गन्धहरुमा फरक गन्ध सुँघाउनु समावेश छ र सामान्यतया कान, नाक, र घाँटी विशेषज्ञ वा न्यूरोलजिस्टद्वारा गरिन्छ। यो तपाइँलाई COVID-19 छ कि एक संकेत हुन सक्छ।
कसरी स्वाद र गन्ध पुनः प्राप्त गर्न (र कहिले स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई हेर्न)
आफ्नो स्वाद र गन्धको भावना हराउनु खतरनाक महसुस गर्न सक्छ - यदि तपाईं ग्यास चुहावट गन्ध लिन सक्नुहुन्न भने के हुन्छ? वा खाना जलिरहेको छ? यो संग पनि सम्बन्धित छ उदास मुड र चिन्ता। शुभ समाचार यो छ कि कोरोनाभाइरसबाट स्वाद र गन्ध गुमाउने प्रायः व्यक्तिहरूले यसलाई केही हप्तामा फेरि प्राप्त गर्नुपर्दछ।
[COVID-१]] भन्दा दुई तिहाइ भन्दा बढी बिरामीहरूले तीन हप्ता भित्रमा तिनीहरूको स्वाद र गन्धको भावना पुनः प्राप्त गर्ने गर्छन, भन्छन्। ओमिद मेहदीजादेह , MD, otolaryngologist (ENT) र सांता मोनिका, CA मा प्रोविडेन्ट सेन्ट जोन्स स्वास्थ्य केन्द्रमा laryngologist। केहि व्यक्तिहरूको लागि, यद्यपि, यी इन्द्रियहरूको हराउन पुनः प्राप्त गर्न अझ समय लिन सक्दछ। एउटा अध्ययनले देखायो कि एक तिहाइ बिरामीहरूले अझै पनि गन्ध र स्वादको अवरोधको रिपोर्ट गरेका छन्। [कोविड -१]] संक्रमणबाट छ देखि सात हप्ता सम्म डा। मेहदीजादेह चेतावनी दिन्छन्। स्वाद पुन: प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा, तपाईं डिस्जियसिया, वा तपाईंको स्वादको विकृति अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ केहि आईटमहरू कोभिड -१ to भन्दा पहिलेको जस्तो स्वाद चाख्दैनन्।
स taste्केतहरू जुन तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग स्वाद र गन्धको गुमाउने बारेमा कुरा गर्नु पर्दछ:
लामो गन्धको घाटा (एक महिना भन्दा बढी)
बाक्लो नाक नाली
यदि तपाईं COVID-१ after पछि तपाईंको गन्ध र / वा स्वादको भावना पुनः प्राप्त गर्न कति लामो समय लाग्दो छ भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ उपचारका लागि केहि विकल्पहरू छन्। तपाईको प्राथमिक हेरचाह प्रदायकले तपाईलाई एक ओटोलारि specialist्गोलजी विशेषज्ञलाई पनि पठाउन सक्छ।
पोषण संक्रामक गन्धको खण्डमा, जसमध्ये COVID-१ one एक हो, गन्ध पुनः प्रशिक्षण उपचारमा केही सुधार प्राप्त भएको देखाइएको छ, भन्छन्।डा। मेहदीजादेह। ऊ सुँघ्ने सल्लाह दिन्छशक्तिशाली सुगन्ध — वा आवश्यक तेलहरू - जस्तै जलेको सुन्तला, निम्बूको घोंसला, मसलाको रूख, र लव्स तीनदेखि चार महिनाको लागि दिनमा तीनदेखि चार पटकसम्म। यो घ्राणो तंत्रिका पुनः उत्पन्न गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
थप रूपमा, डा। मेहदीजादेह भन्छन् त्यहाँ केहि औषधीहरू पनि छन् जुन तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले समावेश गर्न सक्छ:
नाक स्टेरोइड स्प्रे: फ्लोनेज (फ्लुटिकासोन) , नासाकोर्ट (ट्राइमिसिनोलोन) , नासोनेक्स (मोमेटासोन)
मौखिक स्टेरोइड्स: प्रेडनिसोन , मेथिलप्रेडनिसलोन (मेडरोल)
डा। मेहदीजादेहका अनुसार अन्य औषधि सहित जिन्कगो बिलोबा , जिंक , अल्फा Lipoic एसिड , र थियोफिलिन सुझाव गरिएको छ, तर तिनीहरूको प्रभावकारिता प्रदर्शन गरिएको छैन।
किनभने कोविड १ 19 एक उपन्यास भाइरसको कारणले भएको हो (जसमा नयाँ तनाव हो जुन पहिले पहिचान गरिएको थिएन), अन्वेषकहरू र वैज्ञानिकहरूले अझै पनि शरीरमा दिनहुँ यसको प्रभावहरूको बारेमा बढी सिकिरहेका छन्; यसले कसरी हाम्रो गन्ध र स्वादको भावनामा असर गर्छ। यी इन्द्रियहरूको अनुगमन गरेर, र कुनै परिवर्तनहरूका बारे सचेत भएर, हामी आफैंलाई र हाम्रा वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्न सक्छौं।
Monistat 1 दिन उपचार को लागी एलर्जी प्रतिक्रिया
छाती भीड र खोकी को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि के हो
माइग्रेन को लागी topamax लाई काम गर्न कती समय लाग्छ?
सामान्य चिसो यो कहिले सम्म रहन्छ